प्रकाशित : 12:37 pm, आइतबार, मंसिर २९, २०७६
यो अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको भ्रमण वर्षको मुख्य तयारी र नीतिगत सुधारका काममा व्यस्त छन् ।
नेपाली राजनीतिमा आशा र भरोसा गरिएका युवा नेतामध्येका एक भट्टराई आफूले परीक्षाकै रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेको र आफ्नाबारेमा वस्तुगतरुपमा मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य भट्टराईसँग नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीलगायत मन्त्रालयको कार्यभारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
नेपालमा साग ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भएको छ, नेपाली खेडालीले उत्साहजनक परिणाम पनि दिएका छन् । व्यवस्थापकीय, पूर्वाधार, नेतृत्वको क्षमता वा बाह्य प्रस्तुतिजस्ता सबै दृष्टिकोणले साग भब्य भएको छ । यसले नेपालीको आत्मबल बढाएको छ ।
सागका अवसरमा उद्घाटन र समापानका साथै खेलहरु हेर्न जाने क्रममा मेरो खेल क्षेत्रका अन्तरराष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधि, सेभ द मिसनसँग अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी भयो । उहाँहरु भ्रमण वर्षबारे जानकार नै हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुको सद्भाव र समर्थन सम्पूर्णरुपमा हाम्रो नेपाल भ्रमण वर्षका लागि रहेको महसुस गरेँ । त्यसकारण हामीले भ्रमण वर्ष तयारी गरिरहँदा सागको नेपालमा आयोजना हुनु एक सुखद् संयोगमा रुपमा लिनुपर्छ ।
अब नेपालमा ‘पर्यटनका लागि एक दशक’ भन्ने नाराका साथ हामी एक योजना बनाएर अघि बढ्छौँ । विशेष गरी अहिले जनवरी १ को उद्घाटन शत्रको तयारीमा हामी जुटेका छौँ । देशभित्र जनवरी १ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित सात वटै प्रदेशमा र देश बाहिर जनवरी ७ मा एकसाथ भ्रमण वर्षको उद्घाटन हुनेछ । अहिले हामी यसको मुख्य तयारीमा छौँ ।
अन्तरराष्ट्रिय हिसाबले पनि यसलाई भव्यता दिन हामीले विभिन्न देशका पर्यटनमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ । करिब ४० देशका पर्यटनमन्त्रीलाई हामीले निमन्त्रणा पठाएका छौँ र पाहुनाहरुको निरन्तर ‘फलोअप’ भइरहेको छ । कति देशका कस्ता विशिष्ट व्यक्ति आउनुहुन्छ भन्ने उहाँहरुको ‘कन्फरममेसन’ पछि हामी केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्छौैं । उद्घाटनकै लागि हामीले पर्यटन क्षेत्रसँग क्रियाशील विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसमेतलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ ।
निकट भविष्यमै भैरहवास्थित निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदैछ । एक वर्षपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण भइसक्छ ।
यहीबीचमा हामी बारामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनीतिर धेरै सकारात्मक ढङ्गले अघि बढिसकेका छौँ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुदृढीकरण र विस्तारको काम पनि हामीले एक साथ अघि बढाउँदैछौँ ।
देशभरिका ५३ वटा आन्तरिक विमानस्थलको सेवा विस्तार र भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका साथै सबै विमानस्थलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरी लागिपरेका छौँ । अर्को पक्ष, पर्यटन गन्तव्यसम्म पुग्नका निम्ति सडक यातायातलाई व्यवस्थित, सहज र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेका छौँ ।
काठमाडौँ नजिकका पर्यटकीय गन्तव्यमा जान असहज सडकमार्गको सुदृढीकरण तथा उपत्यकाको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइनेछ । साथै, भ्रमण वर्षकै सिलसिलामा ‘काठमाडौँ भ्याली बाई नाइट’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दैछौँ ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रलाई बेलुका पनि भ्रमण तथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी त्यसको लाइटिङको व्यवस्थालगायत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।
देशभित्र पटकपटक हामीले निजी पर्यटन व्यवसायी र नीति निर्मातासँग अन्तरक्रिया गरेकै छौँ र प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ, हो र यसमा सन्तुष्टि लिनु हुँदैन सन्तुष्टिले अगाडिको बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले तयारी जति हुनुपथ्र्यो, त्यति नभएको कुरालाई स्वीकार्दै अब भएका अपूर्णतालाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीनका उच्च नेतृत्व तथा एशियाली मुलुकका विभिन्न उच्च पदाधिकारीको भेटले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी महत्व पनि राख्नेछ ।
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एक निर्विकल्प विकल्प हो, यसमा सरकार पछि हट्दैन । यसको अरु विकल्प छैन । यो विमानस्थल नेपालको निम्ति एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो । विशेषज्ञले दर्जनौँ ठाउँका अध्ययन गरेपछि यो उपयुक्त स्थल किटान भएको हो । त्यस आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले यस आयोजनालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएको हो ।
केन्द्रमा पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति छ । हरेक जिल्लाका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति र स्थानीय निकायमा पनि प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न पहल गरिएको छ । नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन र पर्यटनको लाभ स्थानीय जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने दायित्वअनुरुप हामी योजना बनाएर काम अघि बढाइरहेका छौँ ।
र, अहिले सरकार निजगढबाट पछि हट्ने अवस्था छैन । यो अगाडि बढिसक्यो । त्यहाँ जति पनि प्रश्न उठेका छन् हामी त्यसको व्यवस्थापन गछौँ । वातावरणीय दृष्टिकोणले के गर्नुपर्छ, वातावरण जोगाउन, त्यो हामी गर्नेछौँ । हामी वातावरणीय सुरक्षामा सचेत छौँ ।
गौरवका साथ भन्नुपर्छ कि नेपालको ४५ प्रतिशत हिस्सा जङ्गलले ढाकेको छ र विश्व वातावरण सन्तुलन कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । हाम्रा हिमालबाट आएको पानी विश्वका कैयौँ मानिसको बाँच्ने आधार बनेको छ ।
त्यसैले सरकार वातावरण सन्तुलनप्रति सचेत हुँदै वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति हुने गरी अघि बढ्छ । हामीले अन्तरमन्त्रालय छलफल र परामर्श गरेका छौँ । यसबारे लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेर निचोडमा पुगिसकेका छौँ, त्यसैले हामी यो आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।
निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट सुधार्नैपर्छ, निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर यसको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्छ ।आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि थप जहाज खरिद गर्नुपर्छ । कुन मोडलबाट पारदर्शी खरिद गर्ने यो तय गरिनुपर्छ । यो संस्थाका लागि हामी अन्तरराष्ट्रिय साझेदार पनि खोज्छौँ । यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । यही प्रक्रियाबाट मन्त्रालय अघि बएको छ, व्यवस्थापन सुधारको काममा पनि लागेको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र त्यहाँबाट हवाई उडान शुरु गर्ने समयावधि (सन् २०२० को मार्चभित्र) किटान गरेका छौँ, त्यही समयमै सकिनुपर्छ । यो धराशायी अवस्थामा रहेको आयोजनालाई हामीले यहाँसम्म ल्याएका छौँ ।
मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र उहाँहरुको टिमलाई यसको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, सङ्गठनात्मक संरचना चुस्ता बनाउने र सेवा क्षमता बढाउने सन्दर्भमा केही प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको छु । कार्यकारी प्रमुखले दिनुहोला । एक चरण ब्रिफिङ पनि गरियो । अब आउने कार्ययोजनामा मन्त्रालयले छलफल गर्नेछ ।
उहाँहरुको कस्तो प्रस्तुति रहन्छ, सोही आधारमा निर्णय हुन्छ । कुनै पनि मानिसले यदि दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नसक्ने स्थिति रहेन वा कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थितिले प्रतिकूल हुनसक्छ, त्यस्तो हो भने जिम्मेवार व्यक्तिले ठाउँ ओगटेर संस्थालाई डुबाउनुभन्दा बाटो खुल्ला गरिदिएर त्यो संस्थालाई अगाडि आउने मौका दिनुपर्छ । यो शाश्वत कुरा हो ।
त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको विवरणमा हाम्रो मन्त्रालयले त्यसअवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना जम्मा २९ वटामध्ये छ वटा सम्पन्न भएको र चालू १७ र शुरु भएका छ वटा रहेको प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कमा हाम्रो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति पूँजीगत खर्च ४७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वार्षिक बजेटको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो ।
स्वार्थ समूहका कारण चाहेर पनि कतिपय राम्रा गर्न सकिँदैन भनिन्छ ? पूर्वमन्त्रीका अनुभव पनि त्यस्तै आउने गर्छन् ? तपाईंले स्वार्थ समूहको दबाब महसुस गर्नुभएको छ ?
« आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश घोषणा
नाडाको नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध, अध्यक्षमा कृष्ण दुलाल »